T - Dhammacakkyar dawal Ashin Soma – Thawma - ဓမ္မစင်္ကြာ-ထားဝယ် အရှင်သောမ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ပြုံးသူမှ...
ဦးသောမ(ဓမ္မာစင်္ကြာ-ထားဝယ်) ပြည်တွင်း/ပြည်ပ သာသနာပြု
ဓမ္မကထိကဆရာတော် ဟောကြားသော ပြုံးသူမှာမျက်ရည်စတွေနဲ့...
Tags: ဦးသောမ - ashinthawma uthawma u_thawma ashinsoma ashin_soma ashinsawma ashin_sawma dhammasatkyar dhammacakkyar T - Dhammacakkyar dawal Ashin Soma – Thawma - ဓမ္မစင်္ကြာ-ထားဝယ် အရှင်သောမ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] အကြင်နာပေ...
ဓမ္မကထိကဆရာတော် ဟောကြားသော အကြင်နာပေါင်း...
Tags: ဦးသောမ - ashinthawma uthawma u_thawma ashinsoma ashin_soma ashinsawma ashin_sawma dhammasatkyar dhammacakkyar T - Dhammacakkyar dawal Ashin Soma – Thawma - ဓမ္မစင်္ကြာ-ထားဝယ် အရှင်သောမ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ဝဋ်ကံကြမ္မ...
ဓမ္မကထိကဆရာတော် ဟောကြားသော ဝဋ်ကံကြမ္မာကြောက်စရာ တရားတော်
Tags: ဦးသောမ - ashinthawma uthawma u_thawma ashinsoma ashin_soma ashinsawma ashin_sawma dhammasatkyar dhammacakkyar T - Dhammacakkyar dawal Ashin Soma – Thawma - ဓမ္မစင်္ကြာ-ထားဝယ် အရှင်သောမ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ဝဋ်မှာအမြ...
ဓမ္မကထိကဆရာတော် ဟောကြားသော ဝဋ်မှာအမြဲ ငရဲမှာအပ တရားတော်
Tags: ဦးသောမ - ashinthawma uthawma u_thawma ashinsoma ashin_soma ashinsawma ashin_sawma dhammasatkyar dhammacakkyar T - Dhammacakkyar dawal Ashin Soma – Thawma - ဓမ္မစင်္ကြာ-ထားဝယ် အရှင်သောမ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] မြူမှုန်ကင...
ဦးသောမ(ဓမ္မာစင်္ကြာ-ထားဝယ်) ပြည်တွင်း/ပြည်ပ သာသနာပြု ဓမ္မကထိကဆရာတော် ဟောကြားသော မြူမှုန်ကင်းတဲ့ သံယောဇဉ်...
Tags: ဦးသောမ - ashinthawma uthawma u_thawma ashinsoma ashin_soma ashinsawma ashin_sawma dhammasatkyar dhammacakkyar T - Dhammacakkyar dawal Ashin Soma – Thawma - ဓမ္မစင်္ကြာ-ထားဝယ် အရှင်သောမ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] အရိပ်ပမာ၊...
ဦးသောမ(ဓမ္မာစင်္ကြာ-ထားဝယ်) ပြည်တွင်း/ပြည်ပ သာသနာပြု ဓမ္မကထိကဆရာတော် ဟောကြားသော အရိပ်ပမာ၊ ကံကြမ္မာ တရားတော်
Tags: ဦးသောမ - ashinthawma uthawma u_thawma ashinsoma ashin_soma ashinsawma ashin_sawma dhammasatkyar dhammacakkyar T - Dhammacakkyar dawal Ashin Soma – Thawma - ဓမ္မစင်္ကြာ-ထားဝယ် အရှင်သောမ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ကျွန်းစြု...
ဦးသောမ (ဓမ္မစင်္ကြာ-ထားဝယ်) ပြည်တွင်း/ပ - ကျွန်းစုမြို့နယ်၊ ရေကန်တောရွာ "ဓမ္မပူဇာသဘင်" - အပိုင်း(၁ မှ ၂)အထိ - DMPZ-1...
Tags: ဦးသောမ - ashinthawma uthawma u_thawma ashinsoma ashin_soma ashinsawma ashin_sawma dhammasatkyar dhammacakkyar T - Dhammacakkyar dawal Ashin Soma – Thawma - ဓမ္မစင်္ကြာ-ထားဝယ် အရှင်သောမ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ပန်းစေတီန...
Added: 15th September 2010
ဦးသောမ(ဓမ္မာစင်္ကြာ-ထားဝယ်) ပြည်တွင်း/ပြည်ပ သာသနာပြု ဓမ္မကထိကဆရာတော် ဟောကြားသော ပန်းစေတီနဲ့ သက်သေတည် တရားတော်
Tags: ဦးသောမ - ashinthawma uthawma u_thawma ashinsoma ashin_soma ashinsawma ashin_sawma dhammasatkyar dhammacakkyar Z - Maha GanDarYone Ashin Janakabivimsa - Zanakar BiWunTha - မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော် အရှင်ဇနကာဘိဝံသ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] မဟာဂန္မာရု...
မဟာဂန္မာရုံဆရာတော်ဘုရားကြီး အရှင်ဇနကာဘိဝံသ - ပရိတ်ကြီး၊ ဓမ္မစင်္ကြာ နှင့် အနတ္တလက္ခဏသုတ်
Tags: ပရိတ်ကြီး၊ ဓမ္မစင်္ကြာ နှင့် အနတ္တလက္ခဏသုတ် - payatekyee payategyi paratekyee parategyi dhammasatkyar anantalatkana ashinzanakabiwuntha ashin_zanaka janaka T - Dhammacakkyar dawal Ashin Soma – Thawma - ဓမ္မစင်္ကြာ-ထားဝယ် အရှင်သောမ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ကံပေးတဲ့ဘ...
ကံပေးတဲ့ဘဝ ဉာဏ်လေးနဲ့ဖြတ် တရားတော်
Tags: ဦးသောမ(ဓမ္မစင်္ကြာ-ထားဝယ်) , ဦးသောမ , Dhammacakkyar dawal ashin soma thawma thaw ma , dhammasakkyar , dhammasatkyar Pages: 12of 2